Zvimwe zvinotsanangurwa zveiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus zvinosvinwa | IPhone nhau
Kunyangwe pese patinotaura nezvekudonha isu tinofanirwa kuramba takakahadzika, zvimwe nekuti iyo kambani pachayo yaigona kusefa ivo kana kungoita manyepo, vasvinwa akasiyana maratidziro yeinotevera Apple inotangisa, ndiko kuti, yeiyo iPhone 7 uye iyo iPhone 7 Plus. Ruzivo irworwo rwakaonekwa paChinese Twitter, Weibo, uye rinoburitsa pachena hunhu hwakawanda hweakakosha mapoinzi eanotevera mafoni anounzwa neApple mumavhiki maviri.
Ruzivo rwakaburitswa maawa mashoma apfuura paWeibo anovimbisa, pakati pezvimwe zvinhu, zvakafanana nerunyerekupe ratakatotaura nezvaro mu iPhone News: iyo iPhone 7 ichave 2GB yeLPDDR4 RAMneko iPhone 7 Plus ichave iine 3GB yemhando imwecheteyo ye RAM. Mumwe muongorori akati iyo yekuwedzera 1GB ye RAM yaizodikanwa kugadzirisa ruzivo rwunounganidzwa nemaviri mairi kamera malenzi eiyo iPhone 7 Plus.
Iyo iPhone 7 Plus ichave iine 12 + 12 megapixel kamera
Kuburitswa kwacho kunotaura zvakare pamusoro pemakamera ePhones anotevera, asi ruzivo rutsva rungave chirongo chemvura inotonhorera kune avo vanosarudza iyo 4.7-inch iPhone: iyo iPhone 7 ichave nekamera ye chete 12Mpx -no 21Mpx- kunyangwe iyo sensor ichave 1 / 2.6 ″, pasi kubva pa1 / 3 ″ yeiyo iPhone 6s. Iyo yakavhurika yaidonha kubva ku ƒ / 2.2 kusvika ƒ / 1.9 uye saizi yemapikisheni angave 1.3µm.
Nezve iyo iPhone 7 Plus kamera, zvaizosimbiswa izvozvo ese ari maviri angave 12Mpx, vaizove ne 1/3 ″ sensor uye yavo aperture yaizovewo ƒ / 1.9. Saizi yemapikisheni haisati yaziviswa, saka tichava nechishamiso mune izvi kana iyo iPhone 7 Plus yaratidzwa?
Iyo leak inotipawo isu ruzivo rwebhatiri rezvinhu zviviri izvi: 1960mAh yeiyo 4.7-inch modhi uye 2910mAh yeiyo 5.5-inch modhi. Ruzivo urwu rwunoenderana neruzivo rakabudiswa neOnLeaks muna Chikunguru apfuura uye yaizoshandura kuita 14% yepamusoro bhatiri kupfuura zvazvino mumamodeli akatangwa gore rapfuura.
Sezvatakambotaura pakutanga kwenyaya ino, isu tinofanirwa kuramba takakahadzika pamusoro pekudonha kupi, asi pane zvishoma uye zvishoma kuti tizive kana paine ruzivo rwunosimbiswa kana kuramba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Zvimwe zvinotsanangurwa zveiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus zvakaburitswa
Iwe unogona sei kuudza kuti avo vanonyora izvi havana zano rekutora mifananidzo, ini ndinotsanangura:
> Ivo vanotaura kuti "kunyangwe iyo sensor ichave 1 / 2.6 ″, ichidzika kubva pa 1/3 ″… sensor ye1 / 2.6 yakakura kudarika imwe ye 1/3 (nyore masvomhu ezvimedu, naMwari!) Pakadaro vanofanira shandisa izwi rekuti "kuenda kumusoro" pane kuti "kuenda pasi."
> Imwe, ivo vanoti «Iko kuzarura kwaizodonha kubva pa ƒ / 2.2 kusvika ku ƒ / 1.9 ″… mukutora mifananidzo, idiki iyo F nhamba iyo aperture iri GREATER. ipapo kuvhura kwaisazo "enda pasi" asi KUSIMUKA.
Iwe unofanirwa kuziva zvavanonyora vasati vaburitsa.
Mhoro Manuel. Ini handisi nyanzvi, asi ndiko kure kwandinoenda. Ini ndinotaura nezve nhamba uye nhamba idiki.
Manuel chete ndiye akarurama; Mukutora mifananidzo, iyo yekuzarura kukosha kweiyo diaphragm, idiki iri, iyo yakakura chiyero chechiedza chinogona kupinda mu sensor, uye nekudaro iyo "blur" mhedzisiro ichave yakakura zvikuru uye zvirinani.
Carlos Mendez akadaro
Zvichida tinogona kunzwisisa chinangwa chemunyori kana achitaura nezvekudzikiswa nekuti pachokwadi manhamba ari pasi, kunyangwe achitaura nemifananidzo zvakapesana (zviri pachena muzvinhu zvehunyanzvi senge kuvhurwa kwedhayaphiramu, nekuti tinoziva kuti aperture, ari nani mapfuti mune akadzika-mwenje mamiriro, ayo iyo iPhone isina kubudirira kusvika parizvino) Chii chiri chokwadi ndechekuti kamera yeiyo nyowani iPhone ichave iri nani kwazvo nekutendera zvirinani kupfura.
Pindura kuna Carlos Mendez
Zvinhu zvishanu zveApple zvandinoda kuve paIOS